mairie-antananarivo – fanentanana – fanalana ny 4mi eny amin’ny boriboritany faha efatra
fanentanana – fanalana ny 4mi eny amin’ny boriboritany faha efatra
auteur 7 aogositra 2017 Commentaires fermés
Androany alatsinainy 07 aogositra 2017, amin’ny 8ora sy sasany alina no hatao ny fanentanana andiany faha roa sy ny fampitandremana ny « 4mi » eny amin’ny faritra Anosizato atsinanana, Anosibe ary ny manodidina ny senat sy ny colas.
Rahampitso talata 07 aogositra 2017, amin’ny 8 ora sy sasany alina kosa no hanalana azy ireo tanteraka eo amin’ny faritra voalaza fa voarara tsy azo hanorenam-ponenana dia ireo faritra voalaza etsy ambony izany.
Izao no natao dia nohon’ny fitandrovana hatrany ny fahadiovan’ny tanàna sy ny filaminana Hita tokoa mantsy, fa ny 4mi no mameno iny toerana iny rehefa alina andro, ka mamela maloto eo amin’ny toerana izay nipetrahany rehefa maraina ny andro. Loto izay miteraka aretina sy fofona maimbo ary indrindra manaratsy endrika ny tanàna. Izany indrindra no nahatonga ny mpiara-miasa eto anivon’ny kaominin’Antananarivo renivohitra niara-nientana tamin’ny fanalana ireo 4mi manodidina ny boriboritany faha efatra. Izao no tanteraka dia nohon’ny fiaraha-miasa izay nisy teo amin’ny boriboritany faha efatra, ny departemanta misahana ny asa sosialy, ny polisy monisipaly, ary ny avy eo amin’ny ESA.
Voalazan’i Atoa RATSIMBARISON Herifidy, lefitra faharoan’ny boriboritany faha efatra fa izao hetsika izao dia hitohy ny alarobia 9 aogositra 2017, ary hifarana ny zoma 11 aogositra 2017 ho avy izao. Mba hampaharitra ny hetsika dia natao in-telo isankerin’andro mandritran’ny 2 herinandro ny fanalana 4mi, ary ny mety ho fitohizan’ny asa dia miankina amin’ny tomban’ezaka amin’izao hetsika voalohany izao.